XOG+DHAGEYSO: US,Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabia oo qorshe Halis ah u degay Qadar & Somalia oo ka badbaaday..
September 19, 2018 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 0
Dalalka Imaaraadka Carabta“UAE”, Sacuudi Carabiya iyo Masar ayaa qorsheynayay in ay ku duulaan oo ay qabsadaan dalka Qadar, sida uu sheegay Steve Bannon oo horay uga soo shaqeeyay Aqalka cad ee looga aramiyo Mareynkanka.
Bannon ayaa sheegay in Kullan uu Madaxweynaha Mareynkanka Hogaamiyaasha Carabta kula yeeshay magaalada Riyaadh Bishii May lagu gorfeeyay qorshe lagu qabsanayo Qadar. Keliya warkaan ayaa soo baxay dhammaadkii todobaadkan.
“Waxaannu tagnay shirwaynaha Imaaraadka, Sacuudi Carabiya iyo kuwo kale; Waxa ugu horeeyo ee aan rabno inaan ka taxadarno waxay tahay maalgelinta fikirka “Xagjirnimada”wax badana ma sii jiri karaan,” siduu madaxweyne Trump sheegay,” Ciyaar danbe ma jireyso”,Bannon ayaa sidaasi sheegay.
“Laba dhinac ma jiri kartid,”. Dhinacna kama ahaan kartid inaa tahay saaxiib dhow iyo mid kale oo dhinaca kale ah oo maalgelinaya Isbahaysiga Iqwaanul Muslimiinta ama Hamas, “ayuu ku daray, isaga oo ka hadlayay Xaaladda Qadar madaxweyne Trump.
Labo usbuuc ka dib shirkii magaalada Riyaadh,Imaaraadka Carabta Baxreyn,Masar iyo Sacuudi Arabiya ayaa xiriirka u jaray Dowladda Qadar oo waxyaabaha lagu eedeeyay ay ka mid yihiin taageerida waxay ugu yeereen “argagixisada”.
Waqtigii shirwaynaha, Bannon wuxuu sheegay, inuu hayay warar sheegaya in Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta iyo Masar ay diyaar u ahaayeen in ay tallaabo qaadaan oo ay fuliyaan qorshaha lagula duulayo laguna qabsanayo Qadar.
Khilaafka Khaliijka ayaa wuxuu Xiisad iyo qal qal amni ka dhex abuuray siyaasadda Soomaaliya,waxayna arrintaan sababtay in Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada ku kala qeybsamaan.
Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa go’aan dhex dhexaad ah ka qaadatay Khilaafka Khaliijka,halka Madaxda Mamaul Goboleedyada ay la safteen Imaaraadka Carabta,waxayna tani keentay inuu xumaado xiriirka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya oo badi dibmlomaasiyiinta Saraakiisha ciidan ee ka joogay Soomaaliya uu ka saartay.
Waxayna ka baxday badi xaruntii ugu weyneyd ee ay ku tababareysay Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee Generaal Gordan,taasi oo Dowladda Federaalka balan qaatay iney bixineyso xuquuqaadka ay u baahan yihiin,islamarkaana si joogta ah ula soconeyso xaaladooda.